ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး 48MP Dual Selfie ကင်မရာနဲ့ 64MP ကင်မရာတို့ပါဝင်တဲ့ ZERO 8 ကို Infinix တရားဝင်ဖြန့်ချိ
Infinix ZERO 8 ဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး 48MP Dual Selfie အပြင် ကျောဘက်မှာလည်း Sony IMX 686 lens နဲ့ 64MP ကင်မရာအပါအဝင် ကင်မရာလေးလုံးကို တပ်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Infinix ဟာ Hot9Play နဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲကို မကြာသေးခင်ကမှ ဝင်ရောက်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Hot9Play တုန်းက ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ၆၀% ပိုမိုသုံးစွဲနိုင်တဲ့ ဘက်ထရီသက်တမ်းနဲ့ထိုးဖောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်ရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုလည်း ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Infinix ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဝင်ရပ်တည်တာ သိပ်မကြာသေးပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာတော့ ကုမ္ပဏီဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိက၊ လက်တင်အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ အာရှဒေသအပါအဝင် ကမ္ဘာတစ်လွှားက နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ ကျော်မှာရှိနေပြီး ZERO, NOTE, HOT, S နဲ့ SMART စတဲ့ အဓိက ထုတ်ကုန်လိုင်းကြီး ၅ မျိုးလည်း ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို Hot9Play နဲ့ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် မကြာသေးခင်ကမှ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာကြေညာသွားတဲ့ Infinix ZERO 8 ကလည်း ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ယူဆောင်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ Infinix ZERO 8 ဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး 48MP Dual Selfie အပြင် ကျောဘက်မှာလည်း Sony IMX 686 lens နဲ့ 64MP ကင်မရာအပါအဝင် ကင်မရာလေးလုံးကို တပ်ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Infinix ZERO 8 ဟာ 6.85-inch IPS LCD display အမျိုးအစားနဲ့ဖြစ်ပြီး 1080 x 2460 pixel resolution ဖြစ်သလို၊ 90Hz Refresh rate ကိုလည်း ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ မထူလွန်းမပါးလွန်းတဲ့ Bezel တွေကို တွေ့မြင်ရပြီး၊ ရိုးရှင်းတည်ငြိမ်တဲ့ ဒီဇိုင်းအယူအဆကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်မှာတော့ Pill-shaped-punch-hole နဲ့အတူ 48MP (wide) နဲ့ 8MP (ultra-wide) selfie ကင်မရာနှစ်လုံး တပ်ဆင်ပေးထားပါတယ်။
ZERO 8 ရဲ့ 48MP sensor နဲ့ 4K ဗီဒီယိုလည်း ရိုက်ကူးနိုင်တာက လန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့ ခေတ်သစ်လူငယ်တွေရဲ့ အာရုံကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့ Feature လို့ပဲ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျောဘက်မှာတော့ Diamond-Shaped ကင်မရာအိမ်ဖွဲ့စည်းမှုနဲ့အတူ Sony IMX 686 lens နဲ့ 64MP အဓိကကင်မရာ၊ 8MP (ultrawide), 2MP (depth), 2MP (depth) တို့ကို တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ ကျောပြင်ထက်မှာ Diamond-shpaed နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ Color paint ကိုလည်း ပြုလုပ်ထားပြီး Infinix ကလွဲရင် ဘာမှရှိမနေတာက ရိုးရှင်းတည်ငြိမ်တဲ့ ဒီဇိုင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအတွက် Fingerprint sensor ကို ဘေးဘက်မှာပဲ နေရာချထားခဲ့ရဟန် ရှိပါတယ်။
CPU Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) နဲ့ GPU Mali-G76 MC4 တို့ ပါဝင်တဲ့ MediaTek MT6785 Helio G90T (12nm) chipset ကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပြီး 8GB of RAM နဲ့ တွဲဖက်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သိုလှောင်မှုပမာဏကတော့ 128GB ဖြစ်ပါတယ်။ OS ကတော့ Android 10 ကို အခြေခံထားတဲ့ XOS7ဖြစ်ပါတယ်။ 4,500mAh ဘက်ထရီနဲ့ 33W super-fast အားသွင်းစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးထားတာကြောင့် ၃၆ နာရီကြာ မနားတမ်းဖုန်းပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ၂၆ ရက်ကြာ အသင့်အနေအထားနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Infinix ZERO 8 ကို Black Diamond, Silver Diamond နဲ့ Green Diamond စတဲ့ အရောင်သုံးမျိုးနဲ့ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ ဥရောပဈေးကွက်မှာတော့ EUR 210 (၃ သိန်း ၂ သောင်းခွဲဝန်းကျင်) နဲ့ ရောင်းချနေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်ထဲမှာ ဘယ်အချိန်မိတ်ဆက်မယ်ဆိုတာကို မသိရသေးဘဲ တရားဝင်သတင်းထွက်လာမယ့်အချိန်ကို စောင့်မျှော်ရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
﻿World’s first 48MP Dual Selfie & 64MP Quad Rear Camera Introduced with Infinix Zero 8
Infinix’ latest flagship, the highly anticipated Infinix Zero 8, boasts the world’s first dual 48MP selfie camera and 64MP quad rear camera with Sony IMX 686 lens. The Zero 8 will be available in three striking colors; Black Diamond, Silver Diamond, and Green Diamond.
The Infinix Zero 8 is powered by the MediaTek Helio G90T chipset with 8GB RAM and 128GB internal storage & hasa90Hz refresh rate FHD smooth display. It also boasts World’s first 48MP Dual Selfie Camera andaunique diamond-shaped quad camera witha64MP primary lens. Packinga4500mAh battery with 33W super-fast charging support, the Infinix Zero 8 hasatalk time of 36 hours and 26 days standby time. It runs on Android 10 based XOS 7.
For regular updates on Infinix Myanmar follow us on: